Christian Praise Song | नयाँ जीवनको प्रशंसा गर | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
Christian Praise Song | नयाँ जीवनको प्रशंसा गर
हाल्‍लेलुयाह! सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर! हामी तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छौं र तपाईंको प्रशंसा गर्छौं!
हाल्‍लेलुयाह! सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर! हामी सदासर्वदा तपाईंको आराधना गर्छौं!
आखिरी दिनहरूमा ख्रीष्‍ट देखा पर्नुभएको छ, उहाँका वचनहरूले हामीलाई न्याय गर्छ, धुन्छ र परिवर्तन गर्छ,
हामीलाई सही मार्गमा डोर्‍याउँछ, म परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्ने नयाँ जीवन जिउँछु।
सत्यतालाई बुझ्‍नु कति सुन्दर कुरा हो; अब म भ्रष्ट छैन, स्वतन्त्र छु।
मेरा गलत धारणाहरू सबै मेटिएका छन्, र ममा अब विद्रोह छैन।
अब भौँतारिनु पर्दैन, अब कष्ट भोग्‍नु पर्दैन।
मेरो आत्मा स्वतन्त्र भएको छ, र म परमेश्‍वरको प्रशंसाको गीत गाउँछु।
म परमेश्‍वरको प्रशंसाको गीत गाउँछु।
परमेश्‍वरको प्रेम साँचो र बहुमूल्य छ, जसले हामीलाई जीवनको उज्यालो मार्गमा डोर्‍याउँछ।
मैले कति मीठो प्रेम चाखेको छु, म परमेश्‍वरलाई सदासर्वदा प्रेम गर्नेछु।
दाजुभाइ-दिदीबहिनीहरू, एकसाथ सहभागी हौं, हातमा हात मिलाएर एकै हौं।
एउटै हृदय र एउटै मनको भएर, हामी उहाँको सेवा गर्छौं र उहाँको प्रशंसाको गीत गाउँछौं।
कसले आफ्‍नो हृदयको आवाज निकाल्‍न सक्दैन र? कसले आफ्‍नो प्रेमको आवाज निकाल्‍न सक्दैन र?
तिमी नाच र परमेश्‍वरको प्रशंसा गर, म तिम्रो छेउमा ताली बजाउनेछु।
म तिम्रो छेउमा ताली बजाउनेछु।
हाम्रा गीतहरू परमेश्‍वरप्रतिको प्रेमले भरिएका छन्,
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरले हामीलाई नयाँ बनाउनुभएको छ।
हाम्रो भ्रष्ट पुरानो जीवनको अन्त्य भएको छ, सदासर्वदा परमेश्‍वरको सामने जिउनु आनन्दको कुरा हो!
सत्यताको अभ्यास गरेर यसले हामीलाई स्वतन्त्र तुल्याउँछ; हाम्रो कर्तव्य पूरा गर्छ र परमेश्‍वरलाई महिमित तुल्याउँछ।
उहाँका मानिसहरू नयाँ जीवनमा रमाउँछन्, हामी परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्छौं र नयाँ ज्योतिमा जिउँछौं।
हामीले संसारका बन्धनहरूलाई तोडेका छौं,
हामीले परिवारका बन्धनहरूलाई तोडेका छौं,
हामीले देहका बन्धनहरूलाई तोडेका छौं।
एक-अर्कालाई प्रेम गर्नु कति मीठो कुरा!